Maxaa kala socotaa qiimaha lacageed ee laga rabo musharixiinta u tartameysa labada Aqal ee Baarlamaanka – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maxaa kala socotaa qiimaha lacageed ee laga rabo musharixiinta u tartameysa labada Aqal ee Baarlamaanka
Madaxda madasha Qaran ee dalka Soomaaliya ayaa isla meel dhigay qiimaha lacageed ee laga rabo musharixiinta u tartameeysa xilalka labada Aqal ee Baarlamaanka federaalka Soomaaliya, iyadoo aanay hore u jirin wax lacag ah oo laga qaadi jiray musharaxiinta.
Xildhibaanada u tartamaya Aqalka Sare ee Baarlamaanka ayaa mid kasta waxaa laga rabaa inuu bixiyo lacag dhan $10,000, halka musharaxa xildhibaanka Aqalka Hoose laga doonayo lacag diiwaan-gelin ah oo gaareysa $5,000 oo Dollarka Mareykanka ah.
Dhaqaalaha kasoo xaroon kara musharaxiinta xilalkaan ayaa noqon doonta mid fara badan, hadii kaliya la qorsheeyo in Aqalka sare iyo kan hoose ee Baarlamaanka kursi waliba isu sharaxaan 3 mudane, waxayna lacagta guud noqon doontaa sida soo socota.
Hadii Aqalka Sare oo ka koobnaan doonno 56 kursi uu kursigiiba 3 mudane isku sharaxaan islamarkaana uu midkiiba dhiibo $10,000 oo dollar, waxaa kasoo bixi karta lacag dhan $1,680,000 (Hal Milyan iyo Lix boqol iyo Sideetan kun Dollar), halka Aqalka Hoose oo isna la doonayo 275 kuraas ay kasoo bixi karto lacag dhan $4,125,000 (Afar Milyan iyo Boqol iyo Labaatan Kun Dollar).
Markii la isku daro dhaqaalaha kasoo uruuraya labada Aqal waxay gaareysaa $5,805,000 (Shan Milyan, Sideed Boqol iyo Shan Kun Dollar), waana lacag ku dhow lix milyan oo doolar oo wax badan ka badali karta Soomaaliya.
Dhinaca kale, waxaa weli sii harsan lacagta diiwaan-gelinta musharaxiinta jagada madaxweynaha cusub ee dalka oo lagu wado in markaan ay noqdaan kuwa ugu tirada badan.
Ilaa iyo haatan, lama oga cidda sida rasmiga ah u maamuli doonto dhaqaalahaan tiradda badan, waxaana hore u dhacday in dhaqaale laga qaaday musharixiinta jagada madaxweynaha oo la sheegay in loo adeegsaday xafladii caleemo saarka iyo tii doorashada dalka.